Njirimara na ihe nzuzo nke Ediacara fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka Ediacara fauna. Ọ bụ usoro anụ ahụ nke na - anọchite anya ụdị nile bi na ụwa n’oge a na - akpọ Ediacara. Oge a mere ihe dị ka narị afọ isii gara aga. Echere na anụmanụ ndị a nwere ike jikọta na mmụba nke mere n'oge ahụ n'ọkwa zuru ụwa ọnụ nke ikuku oxygen dị na mbara igwe.
Na nke a, anyị ga-enyocha Ediacara fauna iji chọpụta ihe nzuzo ya niile.
2 Enweghị fosili tupu ebili Ediacara
4 Mkpochapu umu anumanu nke Ediacara
Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na fauna Ediacaran sitere na mmụba nke ikuku ikuku nke mere na 600 nde afọ gara aga. Eziokwu a kwadoro mmepe nke oge ochie dị iche iche nke nwere njirimara na-ahụkarị: ahụ ya na ụdị ya dị nro na ụdị dị iche iche. Achọpụtala ụmụ anụmanụ a na saịtị ochie a hụrụ n'Ugwu Ediacara, Australia.
A na-echekwa akụkọ ọdịnala nke anụmanụ ndị a n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Anụmanụ a bụ ihe nnọchianya nke mmepe dị mkpa na nje multicellular tupu mgbawa Cambrian. Ọ bụ otu n'ime ndụ izizi chọrọ ikuku oxygen na ikuku ka ọ nwee ike ịzụlite. Na mgbakwunye, ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na ọ bụ mmalite nke ihe ndị dị ndụ nwere ọkpụkpụ.
N'agbanyeghị eziokwu na e guzobere ụwa 4550 ijeri afọ, ọ bụghị ruo mgbe Proterozoic ka e nwere ikuku ma ọ bụ ntụgharị gaa na mbara igwe nwere nnukwu oxygen. Na mbụ, ọ bụ naanị ihe ndị methanogenic dị, ebe ọ bụ na ịta ahụhụ nke methane na mbara igwe dị oke elu ma ụmụ irighiri ihe ndị a emeela ka ọnọdụ anaerobic dị.
Oge ikpeazụ nke oge Neoproterozoic bụ ihe a maara dị ka oge Ediacaran. Ná mmalite nke oge a bụ mgbe ihe ndị kacha ochie na-amalite ịmalite. Ngwurugwu ndi a ka di taa ma obu ihe kachasi nke anyi mara. Ndị a bụ sponge mbụ na anemones. Oge a na-amụ banyere ala bidoro afọ nde 635 gara aga wee kwụsị nde afọ 542 gara aga.
Enweghị fosili tupu ebili Ediacara
Otu nkowa enwere ike inye nko n’echeghi na o nweghi uzo o bula nke anakpo aru ndi ozo tupu oge a bu na ndi mmadu biri na mbu enweghi collagen. Collagen bụ protein fibrous nke na-enyere aka iwusi ahụ nke anụmanụ ike ma na-enye ya ohere ịchekwa oge.
Ngwurugwu a naanị na-eme mgbe ọkwa ikuku ikuku dị na mbara karịrị 3%. N'ihi ya, emeghị collagen n'oge gara aga na ikuku ikuku.
E nwere ụfọdụ echiche banyere myirịta nke Ediacaran anụmanụ na ụdị nke anụmanụ ugbu a. Otu echiche bụ na ọtụtụ n'ime anụmanụ ndị a bụ ndị nna ochie nke ụdị anyị maara taa. N'aka nke ọzọ, enwere nkọwa ọzọ na Ediacara fauna nwere ezigbo mgbanwe dị iche na iche. Nke a pụtara na ọ nweghị njikọ ọ bụla na ndị dị ndụ anyị maara taa. Nke a bụ ihe kpatara eji kee ya na phylum dị iche iche nke akpọrọ pendụl Vendozoa.
Ọ bụrụ na enwere ntụle nke fosili ndị ahụ achọtara, anyị nwere ike ịhụ na ụfọdụ ụdị ụdị anwa Ediacara yiri ndị biri na Cambrian. Eziokwu a pụtara na, n'ụzọ ụfọdụ, ha nwere ike jikọta ya na ihe ndị dị ugbu a. Otu ihe atụ kachasị eji eme ihe bụ nke Kimbelerra Cuadrata. Ọ bụ ụdị nke biri na oge Ediacaran ma nwee nnukwu oyiyi nke mollusks dị ugbu a.
Na, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ụzọ na-iyi kpam kpam na-emegiderịta, ịdị adị nke Ediacara fauna nwere ike ịbụ nkọwa maka mgbanwe nke ọtụtụ ụdị nke oge a na anyị nwere taa.
Ihe e kere eke dị na saịtị ochie bụ site n’iji apịtị na aja dị mma kpuchie oke osimiri ahụ. Nke a bụ otu esi kee ụfọdụ ndakpọ ahụ na ahụ dị n'okpuru aja. Dika o nwere oke mmiri, o belatara na odidi, na-eme ka ihe ndi ozo doo anya.
A na-eche anụmanụ ndị a ka ha biri n'akụkụ sedimenti ndị a chọtara na shelf ala emighị emi. Nke a mere ka ha nwee ike ibi n’ime oke oke ala kọntinent ndị dị n’oge a.
De ihe ndi ozo nke Ediacaran nwetara site na ihe ndi nwere aru di nro. Echere na nke a bụ eziokwu, ebe ọ bụ na e nwere ụdị diski ndị e mere site na akụkụ ribbed concentric. I nwekwara ike ịhụ radials dị n'ime ma ọ bụ nchikota ha abụọ.
Akụkụ ọzọ nke fosili bụ na a hụrụ ụfọdụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe na ndị na-amorphous nke nwere ike ịbụ nke ụlọ ochie nke sporophytes.
Mkpochapu umu anumanu nke Ediacara
Ekwuru na anụmanụ a kpam kpam na njedebe nke Precambrian. O nwere ike ịbụ ihe kpatara ya n'ihi oke ịta nri nke anụmanụ ndị a ochie na ọdịiche dị iche iche nke oke osimiri nwere. Zingchịkọta ahịhịa mere ka mkpochapụ nke ọtụtụ ihe ọkụkụ bụ́ ndị ghọrọ ihe oriri maka ụmụ anụmanụ.
Otú ọ dị, n'agbanyeghị nkwenkwe ochie, a maara site na nchọpụta ọhụrụ ọhụụ na ụfọdụ ụdị Ediacaran biri n'oge oge Cambrian.
Offọdụ n’ime ihe kpatara ụdị anụmanụ niile jiri pụọ n’anya bụ:
Ihe ọ :ụlaụ: Ha bụ oge oyi na-atụ nke na-eme ka ihe dị ndụ ghara ịgbasa ma tolite.
Amụma: Ngwurugwu niile nọ na oge Cambrian bụ ụmụ anụmanụ na-eri anụ. Ọ bụrụ na ịkọ a bidoro n'oge ọdịda nke umu anụmanụ nke Ediacara, ọ nwere ike bụrụ isi ihe kpatara mkpochapụ nke ọtụtụ ụdị.
Mgbanwe gburugburu ebe obibi. Nnukwu mgbanwe mmiri, ndu na mgbanwe ihu igwe nke mere na njedebe nke Precambrian na mmalite nke Cambrian mere ka ọtụtụ ụdị ghara inwe ike imeghari ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Ediacara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ediacara fauna
Ọnwa nke Saturn